उपकप्तान मल्लकाे लिस्ट एमा १ हजार रन पूरा ! – Everest Dainik – News from Nepal
उपकप्तान मल्लकाे लिस्ट एमा १ हजार रन पूरा !
काठमाडौं, भदौ १३ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले लिस्ट ‘ए’ मा १ हजार रन पूरा गरेका छन् । उनले बुधबार ओमानविरूद्ध ३२ रन पुरा गरेसँगै लिस्ट ‘ए’ मा ४० खेलबाट १ हजार रन पूरा गरेका हुन्।
बुधबारको ओमान विरुद्धको खेलमा मल्ल ४५ रन बनाएर आउट भए । उनले ६० बलको सामना गरे । जसमा उनले ६ चौका र १ छक्का प्रहार गरेका थिए । एसिया कपको छनोटका लागि अहिले नेपालले ओमानविरुद्ध खेलिरहेको छ । यो समाचार तया पार्दासम्म नेपालले ४ विकेट गुमाउँदै ४० ओभरको खेल सकिदा १३४ रन बनाएको छ ।
लाइभ खेलको स्कोर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
नेपाल र ओमान डिभिजन स्तरका प्रतिद्धन्द्धी हुन् । सात महिना अगाडि नेपाल डिभिजन टु मा रेलिगेसनमा पर्दा ओमानले पनि त्यो प्रतियोगिता खेलेको थियो । अहिलेसम्म यी दुई टिम ५ पटक खेलेका छन् । जसमा नेपालले ३ खेल जिते पनि पछिल्लो ५ वर्षयता ओमानविरुद्ध जित निकाल्न सकेको छैन ।
सन् २००२ को एसीसी ट्रफीमा नेपालले ओमानलाई १०५ रनले हराएको थियो । त्यसको आठ वर्षपछि खेल्दा नेपाल ६ विकेटले विजयी भएको थियो । अन्तिम पटक नेपालले ओमानविरुद्ध २०१३ को डिभिजन थ्रीमा जित निकालेको थियो ।
त्यसपछिका दुई भिडन्तमा नेपाल पराजित भएको छ । जसमा २०१४ को एसीसी प्रिमियर लिगमा २ विकेटको जित निकाल्दा २०१८ को डिभिजन टू मा ओमानले ६ विकेटको जित हासिल गरेको थियो ।
ट्याग्स: Gyanedra Malla, Nepali cricketer Malla